andaohiresakaobjetfahaxvi [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/f/f7bb235ec3176df72daaba19db365392.xhtml failed
Andao Hiresaka Objet indray faha XVI
Raha atao jery todika ary ny lalana vitantsika hatreto, dia inona no azo ambara ?
Ny andrana natrehintsika moa taorian’ny jery ankapobe napetraka tao amin’ny resaka faha-12 dia ny hanorina fampiasana nampiharana ny rafitra miandalan-tohatra raha hiatrika laminasa informatika isika.
Nisy zavatra roa lehiba anefa nomarihintsika tamin’ny valin’ny fanontaniana hoe:
Dia ahoana koa ary izany ny fifandraisan?ilay fomba fijery manasaraka rafitra fanorenana malaza amin’ny MVC (miandalan-tohatra), sy ity rafitra tamban-zotra mampihatra ny fanatonana mpamatsy-mpanjifa ity amin’ny tontolo Java ?
Tsy inona ny valiny narosontsika fa hoe :
Fanorenana lafiny mpanjifa (client)
Fanorenana lafiny mpamatsy (serveur)
Na izany aza, ny tsy maintsy iraisana ara-potodrafitrasa dia: tsy maintsy mihodina anaty JVM ireo kilasy namboarintsika ireo, ary tsy voatery ho JVM tokana ho ihodinan?izireo, fa mety ho maro.
Raha ity farany ity moa no miseho dia asa iray lehibe koa izany ny fandrafetana ny fiaraha-miasan?ireo kilasy manangana ilay fampiharana amin’ireo JVM maro ireo.
Handray ohatra akaiky ary isika, ary tsy hiala amin’ilay fampiasana efa vitantsika ihany.
Izao mantsy no tena zava-misy raha jerena io fampiasana io, rehefa hihodina amin’ny hilana azy marina (fifanakalozana lahasoratra):
Mety ho olona maro eran’ny vazan-tany efatra no handray anjara ao.
Ireo andalan-tohatra asa fanao sy tahiry maharitra, mitantana ny lamina famakiana na fanoratana lahasoratra dia tokony hifampizaran’ny rehetra, fa ny andalan-tohatra fanehoana kosa dia tsara raha afaka aparitaka any rehetra any.
Izay filana izay dia manery antsika fa ilay rafitra fototra (io ambany io) niaingantsika fony tsy nijery afatsy lafiny mpanjifa tsotra tokana isika (tsy dia misy ilaina azy koa io raha tena fampiharana marina; satria ahoana tokoa moa izany hoe : milina iray no ifanoratana lahasoratra maro, ho an?izay mampiasa io milina io ihany ! )
dia voatery tsy miantsy miova toa izao raha toa tsy te-hiala lavitra io rafitra fototra io isika (ohatra iray io an !):
amin’io rafitra vaovao fototra io ary dia hita fa miavaka tsara ny rafitra Mpamatsy (anaty sokera miloko) sy ny rafitra tokony ho Mpanjifa marina, izay tsy inona fa ilay andalan-tohatra fanehoana hitantsika tary aloha ihany eto, saingy tsy maintsy miparitaka amin’ny toerana maro na akaiky (anaty milina misy ny Mpamatsy ihany) na lavitra (mety ho itsy amin’ny milina raika itsy, mety amin’ny milina hafa any amin’ny kaontinanta hafa any mihitsy !).
De ahoana indray ary izany io rafitra Mpamatsy nilatsaka ao ampovoany io ry zoky ah ?
Handramantsika ihany aloha ny hametrahana azy io, fa ny azo itompona teny fantatra ry zandry dia tsy maintsy kilasy i lery, satria isika eto dia tsy hiala mihitsy amin’ny resaka Objet.
Zava-manahirana anefa ity tambanjotra informatika ity ry nama; ka isika tsy handany fotoana hamorona kodiarana indray fa andao hijery izay mety mahasoa ao amin-ny Tetikasa Jakarta (ao anaty Apache Software Foundation izy io) ifampizarana ireo vokam-pikarohana fitaovana fampiasa amin’ny tontolo Java.
Misy ilay antsoina hoe Java XML-RPC ao ary tsy dia mavesatra ilay API, sady mora ampiasaina izaitsizy.
Ny ataon?izy io dia :
Afaka mametraka Mpamatsy sy Mpanjifa mifampizara amin’ny alalan’ny zavatra mifamezivezy XML. Ireo argument na vokatra azo amin’ny fampiasana ireo hetsika na methode-na kilasy miparitaka eran’ny JVM maro mifandray amin’ny tambanjotra informatika, no tena lahasa lehibe ankinina amin’io fitoeran-zavatra afaka mandehandeha na aiza na aiza antsoina hoe: XML io.
Raha adika tsotra moa dia standard fitondrana zavatra azo ifanakalozana amin’ny sehatra maro ny XML.
Ny zavatra atao fotsiny dia:
Manao import fonosana iray : import org.apache.xmlrpc.*;
Mampiasa ireo kilasy mety hilainao amin’ny tanjona tratrarina, na ao amin’ireo kilasy Mpanjifa na ilay kilasy Mpamatsy.
Ny andrana fametrahana kilasy Mpamatsy iray aleo hantsointsika hoe : ResakaObjetServer.java.
import java.net.*; // fonosana tanaty API JSE, fitrandrahana ny tambanjotra informatika
import org.apache.xmlrpc.*; // fonosana fitrandrahana  XML-RPC
public class ResakaObjetServer
// Tsy maintsy manana anarana hamatarana azy ilay Mpamatsy
static private String anaranaMpamatsy = "localhost";
// Ity dia isa hamantarana manokana ity mpamatsy ity ao anaty tambanjotra.
// Tsy azo ekena ny manangana mpamatsy mitovy isa famantarana.
static private int hirikaRPC = 4440;
// kilasy Mpamatsy tao amin'ny API org.apache.xmlrpc.*
private WebServer mpamatsyXmlRpc;
// kilasy mpandray sy mitahiry ny adiresy TCP/IP ?ny milina ihodinan'ny
private InetAddress adiresyMpamatsy;
// Mampifandray amin'ny andalan-tohatra ASA FANAO sy FITEHIRIZANA MAHARITRA
// Constructeur ?ny Mpamatsy XML-RPC
zavatra = new ZavatraAzoKajiana(); // Objet andalan-tohatra Asa fanao
adiresyMpamatsy = InetAddress.getByName(anaranaMpamatsy);
mpamatsyXmlRpc = new WebServer(hirikaRPC, adiresyMpamatsy);
System.out.println("Mpamatsy XML-RPC (ResakaObjet) mihodina :\_nHirika : "
+adiresyMpamatsy + " : " + hirikaRPC + " ...");
System.out.println("(Diso !) Mpamatsy XML-RPC tsy mihodina");
public int ajanonaMpamatsy()
static public void main(String arg)
Entina hitehirizana ny adiresy TCP/IP ?ny Mpamatsy XML-RPC miainga avy amin’ilay anarana nomena azy (mifandray ireo an !).
Mapihodina avy hatrany ilay Mpamatsy voafaritra tao anaty API, fonosana org.apache.xmlrpc.*. Nomerao 4440 ny famantarana ny hirika hidirana amin’ity Mpamatsy ity.
Manoratra sy mametraka ny anarana (eto dia : lahasoratra no anarana) homena ilay Objet ZavatraAzoKajiana rehefa hiantso ireo hetsika avy lavitra, ny Mpanjifa rehetra mifandray amin’ity Mpamatsy ity.
Ilay hetsika addHandler(?) moa dia entina handraiketana ny fifandraisanan’ny Objet zavatra sy ny anarana ?lahasoratra?. Tsara marihina mantsy fa rehefa mampiasa XML isika dia tadidio fa tsy maintsy zavatra aseho amina karazana soratra no tian?io XML io hiasana (izay no ilaina ireo parser XML etsy sy eroa, manao izay asa famadihana izay foana)
Rehefa mihodina ity kilasy ity dia izao no hita:
Ny dikan?io izany dia misokatra ho an’ny rehetra ny fampiasana ilay Objet ZavatraAzoKajiana tetsy ambony, ho an?ireo Mpanjifa rehetra mifandray amin’ity Mpamatsy ity.
Amin’ny manaraka indray ary isika hijery akaiky izay tokony hatao amin’ny lafiny Mpanjifa, raha tiana ny hifandray marina amin’io Mpamatsy efa azo ampihodinina io.
(Mbola tohizana an ...)
andaohiresakaobjetfahaxvi.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43